Protecting Minority Investors | Myanmar Doing Business
၂၀၂၀ ခုနှစ် အဆင့် : ၁၇၆ (DB2019 တွင် ၁၈၅)
၂၀၂၀ လူနည်းစုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို အကာအကွယ်ပေးခြင်း ရမှတ် : ၂၂.၀ (DB2019 တွင် ၂၅.၀၀)
ဒေသတွင်းပျမ်းမျှ (အရှေ့အာရှပစိဖိတ်) : လူနည်းစုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို အကာ အကွယ်ပေးခြင်း အဆင့် ၉၉ လူနည်းစုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို အကာအကွယ်ပေးခြင်း ရမှတ် ၄၉.၇
လူနည်းစု ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို အကာအကွယ်ပေးခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များကို ပိုမိုသိရှိရန် - ဤနေရာကို နှိပ်ပါ။
*The ease of doing business score captures the gap between an economy’s performance andameasure of best practice across the entire sample of 41 indicators for 10 Doing Business topics (the labor market regulation indicators are excluded). (ရင်းမြစ် : ကမ္ဘာ့ဘဏ်)
ဆက်နွယ်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်နှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်တွင်လည်းကောင်း၊ ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုတွင်လည်းကောင်း လူနည်းစုအစုရှယ်ယာ ရှင်များ၏ အခွင့်အရေး
လူနည်းစုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား အကာအကွယ်ပေးရာတွင် ပိုမို အားကောင်းစေရေးအတွက် အောက်ပါအချက်များနှင့် သက်ဆိုင်ပါ သည်-
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်း အစီရင်ခံစာ ၂၀၂၀ တွင် ဖော်ပြထားချက် အရ အဖြေ
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်း အစီရင်ခံစာ ၂၀၂၀ အရ သတ်မှတ်ထားသည့် ရမှတ်
အကျိုးစီးပွားထိခိုက်မှုအပေါ် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ညွှန်ကိန်းအဆင့် (၀-၃၀)
ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုညွှန်ကိန်းအဆင့် (၀-၁၀) ၄
ဝယ်သူ-ရောင်းသူ ငွေပေးချေမှုကို အတည်ပြုရန် မည်သူ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်မှာ အရေးပါ ပါသလဲ? (၀-၃) စိတ်ပါဝင်စားသူ ကုမ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူများမှအပ ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ ၂
ငွေပေးငွေယူမပြုလုပ်မီ ၎င်း ပေးချေမှုကို ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်/အဖွဲ့အစည်းမှ ပြန်လည် ဆန်းစစ်ရမည်။ (၀-၁) မရှိပါ။ ၀
မစ်စတာဂျိမ်းသည် သူ၏ အကျိုးစီးပွားထိခိုက်မှုအပေါ် ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့သို့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရမည်။ (၀-၂) အပြည့်အဝ ထုတ်ဖော်ရမည်။ ၂
အချိန်ကာလအလိုက် တင်ပြခြင်းများတွင် ဝယ်သူမှ ငွေပေးငွေယူမှုကို ထုတ်ဖော် ပြောဆိုရမည်။ (ဥပမာ- နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာများ) (၀-၂) ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန် တာဝန် မရှိပါ။ ၀
ဝယ်သူမှ ငွေပေးငွေယူမှုကို အများပြည်သူသို့ ချက်ချင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆို ရမည်။ (၀-၂) ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန် တာဝန်မရှိပါ။ ၀
ဒါရိုက်တာ၏ တာဝန်ခံမှု ညွှန်ကိန်းအဆင့် (၀-၁၀) ၄
ဝယ်သူကို ထိခိုက်မှုရှိစေခြင်းအတွက် ဝယ်သူ၏ ရှယ်ယာမတည်ငွေရင်း၏ ၁၀ရာခိုင်နှုန်းကို ကိုယ်စားပြုသည့် ရှယ်ယာရှင်များအနေဖြင့် တရားစွဲနိုင်ပါသလား? (၀-၁) တရားစွဲနိုင်ပါသည်။ ​ ၁
ဝယ်သူကို ထိခိုက်မှုရှိစေခြင်းအတွက် မစ်စတာဂျိမ်း၏ တာဝန်ရှိမှုကို ရှယ်ယာရှင်များ အနေဖြင့် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသလား? (၀-၂) တာဝန်ရှိပါသည်။ ၁
ဝယ်သူကို ထိခိုက်မှုရှိစေခြင်းအတွက် အခြားဒါရိုက်တာများ၏ တာဝန်ရှိမှုကို ရှယ်ယာရှင်များအနေဖြင့် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသလား? (၀-၂) တာဝန်ရှိပါသည်။ ၁
ရှယ်ယာရှင်များ၏ တရားစွဲဆိုပြီး တောင်းဆိုမှုအရ ဝယ်သူအပေါ် ထိခိုက်မှု ဖြစ်စေခြင်းအတွက် မစ်စတာဂျိမ်းအနေဖြင့် ပေးလျော်မှု ပြုလုပ်ရမည်လား? (၀-၁) ပြုလုပ်ရမည်။ ၁
ရှယ်ယာရှင်များ၏ တရားစွဲဆိုပြီး တောင်းဆိုမှုအရ ပေးချေမှုမှ ရရှိလာသည့် အကျိုးအမြတ်များကို မစ်စတာဂျိမ်းအနေဖြင့် ပြန်လည်ပေးဆောင်ရမည်လား? (၀-၁) မရှိပါ။ ၀
ရှယ်ယာရှင်များ၏ တရားစွဲဆိုပြီး တောင်းဆိုမှုအရ မစ်စတာဂျိမ်းမှာ အရည်အချင်း ပြည့်မီပါသလား? (၀-၁) မရှိပါ။ ၀
ရှယ်ယာရှင်များ၏ တရားစွဲဆိုပြီး တောင်းဆိုမှုအပေါ် တရားရုံးအနေဖြင့် ပေးချေမှုကို ရှောင်လွှဲနိုင်ပါသလား? (၀-၂) လိမ်လည်ခြင်း သို့မဟုတ် မရိုးဖြောင့်ခြင်း ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအတွက်သာ ၀
အစုရှယ်ယာရှင်မှ တရားမမှုများ တရားစွဲခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လွယ်ကူမှု ညွှန်ကိန်း (၀-၁၀) ၃
တရားမစွဲဆိုမီ ဝယ်သူ၏ ရှယ်ယာမတည်ငွေရင်း၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ကိုယ်စားပြု သည့် အစုရှယ်ယာရှင်များအနေဖြင့် ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများကို စစ်ဆေးနိုင်ပါသလား? (၀-၁) စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ ၁
အမှုစစ်ဆေးရာ၌ တရားလိုအနေဖြင့် တရားပြိုင်နှင့် သက်သေများထံမှ စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများကို ရရှိနိုင်ပါသလား? (၀-၃) မရရှိနိုင်ပါ။ ၀
တရားလိုအနေဖြင့် တရားပြိုင်ထံမှ တိတိကျကျစာရွက်စာတမ်းအမျိုးအစား သတ်မှတ်ထားချက်မရှိဘဲ စာရွက်စာတမ်းအမျိုးအစားများကို တောင်းခံနိုင်ပါသလား? (၀-၁) မတောင်းခံနိုင်ပါ။ ၀
တရားလိုအနေဖြင့် အမှုစစ်ဆေးရာ၌ တရားပြိုင်နှင့် သက်သေများအား မေးခွန်း တိုက်ရိုက်မေးမြန်းခွင့်ရှိပါသလား? (၀-၂) ရှိပါသည်။ ၂
ပြစ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များထက် တရားမမှု တရားစွဲဆိုမှုအတွက် သက်သေအဆင့် လိုအပ်ပါသလား? (၀-၁) မလိုအပ်ပါ။ ၀
အစုရှယ်ယာရှင်တရားလိုများအနေဖြင့် ဥပဒေကြောင်းအရ ကုန်ကျစရိတ်များကို ကုမ္ပဏီထံမှ ပြန်လည်တောင်းဆိုနိုင်ပါသလား? (၀-၂) တရားရုံး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ဖြစ်ပါသည်။ ၀
အစုရှယ်ယာရှင်၏ စီမံအုပ်ချုပ်မှုညွှန်ကိန်း အတိုင်းအတာ (၀-၂၀)
အစုရှယ်ယာရှင်၏ အခွင့်အရေးညွှန်ကိန်းအတိုင်းအတာ (၀-၆) ၀
ဝယ်သူ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု၏ ၅၁ ရာခိုင်နှုန်း ရောင်းချမှုအတွက် အစုရှယ်ယာရှင်၏ ခွင့်ပြုချက် လိုအပ်ပါသလား? မလိုအပ်ပါ။ ၀
ဝယ်သူ၏ ရှယ်ယာ၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ကိုယ်စားပြုသည့် အစုရှယ်ယာရှင်များ အနေဖြင့် အစုရှယ်ယာရှင်အစည်းအဝေး ခေါ်ယူနိုင်ပါသလား? ခေါ်ယူနိုင်ပါသည်။ ၁
ရှယ်ယာအသစ်ထုတ်ဝေသည့်အခါတိုင်း ဝယ်သူအနေဖြင့် အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ အတည်ပြုချက် ရရှိဖို့လိုပါသလား? မလိုအပ်ပါ။ ၀
ကုမ္ပဏီတွင် သူ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုအချိုးကို ထိန်းသိမ်းထားရန်အတွက် အနာဂတ်တွင် ထုတ်ဝေနိုင် သည့် ရှယ်ယာများကို ကြိုတင်ဝယ်ယူထားနိုင်သည့် အခွင့်အရေးကို အစုရှယ်ယာရှင်များ အနေဖြင့် ဝယ်သူမှ အစုရှယ်ယာများ ထုတ်ဝေသည့် အခါတိုင်း အလိုအလျောက်ရရှိပါသလား? မရရှိပါ။ ၀
ပြင်ပစာရင်းစစ် ခန့်အပ်ခြင်းနှင့် ဖယ်ရှားခြင်းတို့အတွက် အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ အတည်ပြုချက် လိုပါသလား? လိုပါသည်။ ၁
ထိခိုက်နစ်နာမှုရှိသည့် ရှယ်ယာရှင်များမှ အတည်ပြုပါက ရှယ်ယာအမျိူးအစား၏ အခွင့်အရေးများ ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်နိုင်ပါသလား? ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ၁
ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုညွှန်ကိန်းအတိုင်းအတာ (၀-၇) ၀
လူတစ်ဦးတည်းကို စီအီးအိုနှင့် ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ခန့်အပ်မှုကို တားမြစ်ထားပါသလား? မတားမြစ်ထားပါ။ ၀
ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့တွင် ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် အဆင့်မြင့်ဘုတ်အဖွဲ့ဝင် မဟုတ်သူများ ပါဝင်ရပါမည်လား? မလိုပါ။
ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့တွင် သီးခြားစာရင်းစစ်ကော်မတီတစ်ခု ပါဝင်ရမည်လား? မဟုတ်ပါ။ ၀
ဝယ်သူ၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းရယူခြင်းအတွက် အလားအလာရှိသည့် ရရှိသူမှ ရှယ်ယာရှင် အားလုံးသို့ တင်ဒါကမ်းလှမ်းမှု ပြုလုပ်ရမည်လား? မလိုပါ။ ၀
ဥပဒေအရ သတ်မှတ်ထားသည့် အကြာဆုံးကာလအတွင်း ဝယ်သူအနေဖြင့် ကြေညာထားသည့် အမြတ်ဝေစုကို ပေးရမည်လား? မလိုပါ။ ၀
လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ၎င်း၏ မိခင်ကုမ္ပဏီမှ ထုတ်ဝေထားသည့် ရှယ်ယာရယူခြင်းကို တားမြစ်ခံနေရပါသလား? မဟုတ်ပါ။ ၀
ကော်ပိုရိတ်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုညွှန်ကိန်းအတိုင်းအတာ (၀-၁၀) ၀
၅ ရာခိုင်နှုန်းကို ကိုယ်စားပြုသည့် တိုက်ရိုက်နှင့် သွယ်ဝိုက်အကျိုးရှိသော ပိုင်ဆိုင်မှု အပေါ် ဝယ်သူအနေဖြင့် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရမည်လား? မလိုပါ။ ၀
အခြားကုမ္ပဏီများတွင် ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များ၏ ကနဦးအလုပ်အကိုင်နှင့် ဒါရိုက်တာရာထူးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်ကို ဝယ်သူအနေဖြင့် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရမည်လား? ​ပြောဆိုရမည်။ ၁
ဝယ်သူအနေဖြင့် မန်နေဂျာတစ်ဦးချင်းစီ၏ လျော်ကြေးပေးမှုအပေါ် ထုတ်ဖော်ပြောဆို ရမည်လား? မလိုပါ။ ၀
အစည်းအဝေးမကျင်းပမီ ၂၁ ရက်အတွင်း အထွေထွေအစည်းအဝေး၏ အသေးစိတ် ကြေညာချက်ကို ပေးပို့ရမည်လား? ​ပေးပို့ရမည်။ ၁
ဝယ်သူ၏ ရှယ်ယာမတည်ငွေရင်း၏ ၅ ရာခိုင်နှုန်းကို ကိုယ်စားပြုသည့် ရှယ်ယာရှင်များအနေဖြင့် အထွေထွေအစည်းအဝေးအစီအစဉ်တွင် အစီအစဉ်များ ထည့်သွင်းနိုင်ပါသလား? မလိုပါ။ ၀
ဝယ်သူ၏ နှစ်စဉ်ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းကို ပြင်ပစာရင်းစစ်နှင့် စာရင်းစစ်ရပါမည်လား? ရပါမည်။ ၁
ဝယ်သူအနေဖြင့် အများပြည်သူသို့ ၎င်း၏ စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာအား ထုတ်ဖော် ပြောဆိုရမည်လား? မလိုပါ။ ၀
၂၀၁၈ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင် အသက်ဝင်ခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီဥပဒေအသစ်တွင် လူနည်းစုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို အကာအကွယ်ပေးမှုများ ပါဝင်ပါသည်။ ​
ကုမ္ပဏီဥပဒေအသစ်နှင့် နည်းဥပဒေများကို ထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍသို့ ၎င်းကုမ္ပဏီဥပဒေ၏ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ရှင်းလင်းပြောကြားရန် ကာလတို ဆောင်ရွက်ဆဲ
အသစ်ပြဋ္ဌာန်းထားသော လူမွဲခံယူခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအပေါ် ဆန်းစစ်ခြင်း ကာလတို ဆောင်ရွက်ဆဲ
ပံ့ပိုးပေးခြင်းမရှိစေကာမူ ကုမ္ပဏီဥပဒေအသစ် အသုံးပြုမှုကို ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အောက်ပါတို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်
၁။ စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီများနှင့် အများပိုင်ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးများအတွက် ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်သက်ဆိုင်သည့် စည်းကမ်းများကို ကန့်သတ်ရန်။
၂။ ဆက်နွယ်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်၏ ငွေပေးငွေယူမှုများအတွက် ရှယ်ယာရှင်၏ ခွင့်ပြုချက် လိုအပ်ရန်။
၃။ ငွေပေးငွေယူမပြုလုပ်မီ ဆက်နွယ်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်၏ ငွေပေးငွေယူမှုအပေါ် မှီတည်မှုကင်းသည့် ရှင်းလင်းရေးသားချက်လိုအပ်ရန်။
၄။ အစုရှယ်ယာရှင်များကို ထိခိုက်မှုဖြစ်စေမည့် ဆက်နွယ်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်၏ ငွေပေးငွေယူမှု ကို ရှောင်ရှားရန်အတွက် တရားရုံးကို ခွင့်ပြုရန်။
၅။ အမြတ်ဝေစုကို ဖော်ပြသည့်အခါ တိကျပြီး ကျိုးကြောင်းသင့်လျော်သည့် အချိန်ကာလ အတွင်း အစုရှယ်ယာရှင်များမှ ပေးရမည်ကို သေချာစေရေး ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု မူဘောင်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်များကို မိတ်ဆက်ရန်။
၆။ အစုရှယ်ယာအသစ်များ ထုတ်ဝေခြင်းအတွက် ရှယ်ယာရှင်၏ ခွင့်ပြုချက် လိုအပ်ရန်။
၇။ ကုမ္ပဏီမှ တတိယပုဂ္ဂိုလ် လိုအပ်လျှင် အစုရှယ်ယာရှင်များအား လက်ရှိအော့ပ်ရှင်ကို ကမ်းလှမ်းမှုကို သေချာစေရေး ကော်ပိုရိတ်အုပ်ချုပ်မှု မူဘောင်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်များကို မိတ်ဆက်ရန်။
၈။ စီအီးအိုနှင့် ဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌတို့၏ အခန်းကဏ္ဍကို ခွဲခြားရန်။
၉။ ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့တွင် ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် အဆင့်မြင့်ဘုတ်အဖွဲ့ဝင် မဟုတ်သူများ ပါဝင်နိုင်ရန်။
၁၀။ အမှုမစစ်မီနှင့် အမှုစစ်ဆေးနေသည့် ကာလအတွင်း တရားလိုများမှ ကော်ပိုရိတ် အချက်အလက်အထောက်အထားများ ရရှိနိုင်ရေး လွယ်ကူစေရန်။
၁၁။ စီးပွားရေးဆောင်ရွက်မှုဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှတစ်ဆင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန်။ ကာလလတ်မှ ကာလရှည် ဆောင်ရွက်ဆဲ
ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း တိုးတက်လာစေရန် ကာလရှည် တိုးတက်လျက် ရှိပါသည်။ (IFC နှင့် OECD တို့၏ အကူအညီဖြင့်)
The Protecting Minority Investors Indicator Support Group is headed by the Director General of the Directorate of Investment and Company Administration (DICA), Ministry of Investment and Foreign Economic Relation